Navoakan'ny Semalt Compartilha ny Asabotsy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ao amin'ny tontolon'ny asa raharaham-barotra dia matetika no noheverina fa ny fanadihadiana momba ny asany sehatr'ireo mpandalina amina havaozina, raha toa kosa ny asan'ny qualitative, toy ny dokam-barotra sy ny varotra, ny sehatra mahatalanjona amin'ny famoronana. Ireo hetsika roa ireo, na dia samy ilaina amin'ny fahombiazan'ny orinasa aza, dia miteny tsy misy dikany.
Igor Gamanenko, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services, dia nanambara fa nanova ny toetoetra ny fielezan'ny tahiry lehibe. Ireo mpamorona an'io rakitra lehibe io dia amin'ny famaritana rehetra ny upary taranaka ho avy. Izy ireo dia miaina ny fiainany amin'ny haino aman-jery sosialy, amin'ny fanatanterahana ny asany isanandro araka ny hafatra amin'ny SMS,sary dizitaly sy ny playlists ary koa ny safidiny azon'ireo Internet cookies.
Miresaka amin'ny teny an-tsoratra, emoji sy memes izy rehetra, navela nomerika digital miova ho rakitra, izay voatanisa ao anaty bits sy bytes - ocean indoor playground. Ity endriky ny doka ara-barotra nomerika, navoakan'ny haino aman-jery nomerika sy sosialy dia nitondra ireo fiaraha-mikorana roa ireo. Noho izany, raha te hahomby dia tsy maintsy mianatra miteny amin'ny fitenenana ihany koa ireo manampahefana ara-barotra amin'izao vanim-potoana izaoAmin'ny maha-paikady sy ny soritr'aretina amin'ny endrika roa dia ny angon-drakitra.
Raha tsy tianao ny handao ny raharaham-barotra, dia mila manaiky ny angon-drakitra ianao demokrasia. Ny tahirin-kevitra goavana dia nanjary ran'ny hetsika ara-barotra, ka miteraka demokrasia vaovao..Izy io dia misokatra mivantana arybahoaka. Ankoatra izay, ny habetsany sy ny karazany dia lehibe, ka sarotra ny mitazona ny fomba fitaterana mahazatra izay tena izyMametraka ny angona amin'ny fomba voafaritra tsara.
Raha tokony ho izany dia mila manadihady momba ny fizakan-tena manokana ny mpandalina raharaham-barotra mba hahazoana antokaIreo mpitantana ny laharana dia mahazo ny angona takiany mba handraisana fanapahan-kevitra sy handray andraikitra hentitra. Amin'ny alàlan'ny tahirin-kevitra lehibe kokoa azo amin'ny endrika izay tsy dia voatsinjara, ny orinasa iray dia afaka mampihatra ny governemanta, ny analytics, ny fiarovana ary ny tatitra ho toy ny arofanina mpiambina mba hahazoana antoka ny vaovaomihazakazaka tsara sy marina tsara.
Ireo mpandoa hetra dia tsy maintsy nianatra ny antontan'isa vaovao sy ny analytics vaovao. Tsy izany intsonyampy hahafantarana ireo mpanjifa mifototra amin'ny demografika etika. Mila mianatra ny fomba hijerena sy hanehoan-kevitra amin'ny fomba fitondran-tena vao miseho izy ireoary ny safidiny izay tsikaritra avy amin'ny dian-dianan'ny mpanjifa.
Toy izany koa, ny mpandinika dia mianatra ny fitenin'ny mpivarotra ary ny fomba ahafahany manao izanyMandika amin'ny fomba fitondran'ny mpanjifa sy ny preferences izay mety hozaraina sy hijerena azy. Amin'izany fomba izany, afaka samy miara-miasa avokoa ny mpivarotra sy ny mpandinikaManangana ny tatitra momba ny angona sy ny modely analôlônika izay mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fenitra roa farany sy ny tatitra farany.ho an'izany.
Ny tena tanjon'ny mpanjifa dia tena be volom-borona, ka tsy azo trandrahana ao anaty fefy set of spesials. Izy ireo dia zavatra mamohehatra izay tonga sy mandeha, toy ny onjan'ny onja, ary amin'ny ankamaroan'ny tranga, efa ela ny onja Ny tatitra dia natsangana sy natolotra.
Noho izany, raha te hahomby amin'ny tontolo maoderin'ny Big Data ianao, Mila mianatra ny fomba fampidirana ireo drafitra madinika toy ny analytics sy ny siansa momba ny raharaham-barotra miaraka amin'ny dingan'ny kalitao ianao ohatra, tetikady ara-barotra sy fanadihadiana fanapahan-kevitra. Raha manao izany ianao dia hametraka ny tenanao ho amin'ny fahombiazana ao amin'ny tontolon'ny digital.